Seenaa Koloneel Aliyyii Cirrii‬ (1921-2017) – Oromedia
Home » Seenaa » Seenaa Koloneel Aliyyii Cirrii‬ (1921-2017)
Bara 1921 ilmi Oromoo tokko Oromiyaa Kibba bahaa, baddaa Baalee keessatti dhalate. Yeroo san maatii fi lammiin akkuma aadaatti shan ililchanii, eebbisan. Eebbi sunis goota har’a Oromoon seenaa keessatti faarfachaa jiru, Koloneel Aliyyii Cirrii, magarsee guddise. Aliyyii Cirrii godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa ganda Cirriitti; abbaa isaa obbo Cirrii Jaarraa fi haadha isaa aadde Badheessoo Miinaa irraa bara 1921 dhalate.
Sirna Hayilasillaasee keessa bara 1965 Waxabajjii keessa Oborso aanaa Madda Walaabuutti nafxanyaa muddees waraanera. Qabsoo Oromoo Baalee finiinsuunis nama maqaa adda durummaa qabu.
Aliyyi, magaala, jajjaba, dhaabbata qajeelaa qabu. Koloneel Aliyyii haadha warraa afur irraa ijoollee 25 horateera.
Ayyaana Iid Al faxir 1437ffaa, bara 2016 sababeeffachuun OBS Aliyyii Cirrii waliin turmaata taasiseet ture. Koloneel Aliyyiin “Ilmaan teenyayyuu osoo qabsoorra jirruu bosonuma keessatti horre, yeroon nuti loon horsiifannee dikee jalaa harre hin jiru. Humnaa fi yeroo keenya bosona seennee qawwee diinarratti dhukaasaa turre.” Jedha seenaa isaa yoo himatu.
Baaletti yeroo Aliyyii Cirriifaanti ijoollee turan qabsoo kan jalqabe Mahaammad Gadaa Qaalluuti. Qawwee Xaaliyaanirraa bara 1945 argateeni lolichas kan jalqabe.Sirna Hyilasillaasee sanarra gabrummaan filatamuu baatus Xaaliyaanii wayyaayyu Oromoof jedhu Haji Adam Tiinnaa seenaa Koloneel Aliyyii fi hacuuccaa bara sanaa yoo himan.
Bara 1964 Madda Walaaburraa nafxanyaa ari’uun to’annoo ofii jala oolchan. Maddatti yoo walga’anis hoogganaa filatan.
Waajjirri Dhimmoota Koomuniikeeshinii aanaa Madda Walaabuu (2016) waa’ee Koloneel Aliyyii raga yoo ba’u, Koloneel Aliyyii Cirrii jeneraala waraanaa diina isaanitiin maalif isaaninakka lolan yoo itti himan; “Nuti kan isiniin lolluuf isin diina keenya waan taataniifi. Yoo isin injifannes yoo duune seenaa arganna. Isin injifannaanis lafa keenya; lafa ummata Oromoo isa bareedaa kana isa uummanni duraanii lafa isaatti boonee loon isaa irratti bobbaafachaa ture, seera isaa irratti tumataa aadaa fi afaan isaa itti guddifataa ture kana arganna” jedhee deebiseef.
Koloneel Aliyyiin sirnicha kana cal jedhee hin ilaalle ture. Akkuma mootummaa Hayila Sillaasee irratti qabsaa’een mootummaa dargii jalas dhaabbachuun hacuuccaa cunqursaa ummata oromoo irratti gahaa ture ofirraa qolachuuf hoomaa waraanaa isaa qabatee dargiin lolaa turuun isaa ni beekama. Koloneel Aliyyiin uummanni Oromoo tokkummaa kan qabaatuf ilaalcha biyyoolessummaa qabu ture.
Koloneel Aliyyii Cirrii dhalatanii umrii isaanii 96tti addunyaa kana irraa du’an boqotan; sirnii awwaalcha isaanii Sadaasa 14 bara 2017 bakka aangawoonni, artistonnii fi uummanni Oromoo hedduun argamanti Madda Walaabuu keessatti gaggeeffame. Koloneel Aliyyiin qabsaa’ota bara 1960ta keessa Fincila Baalee keessatti ituu dargaggummaa hin ga’iin itti hirmaatan. Qabsoon gaggeessanis mootummaan Haayle Sillaasee uummata Oromoo irratti cunqursaa fi gabrummaa gaggeessuu dhabamsisuu irratti kan fulleeffate ture.
Previous: ኦጋዴንና የሀገር አንድነት ሥጋቶች
Next: የቦረና ኦሮሞ አባ ገዳዎች (1467 – 2016)